U bevindt zich hier: Home Curiye ( Editor )
seroquel xr for sale buy depakote online
melatonin dogs saleHordhac :
Waa Maxamed Maxamuud Geeddow oo idin leh kusoo dhawaada saytka degmada Cadale. cheap viagra sale
Saytkaan Cadale.com waxaan ugu talagalay dhamaan reer Cadale inaan ku matalo shabakada internet-ka oo ah meel lagu kobcin karo jiritaanka iyo taariikhda degmada Cadale iyo dadka dego.
Waxaan soo dhawayhaa dhamaan reer Cadale wixii talo, tusaale, sixitaan inay isoo gudbin karaan. Waxaan kaloo ka codsanayaa in haddii ay jiraan dad haayo taariikho, maclumaad ama masawiro ay isoo gudbiyaan, anigana waxaan balanqaadayaa inaan soo gelin doono saytka Cadale.com.buy eos lip balm ontario
buy benadryl-d online Haddii aad la kulanto aqbaaro, ama macluumaad kale oo quseeyo Cadale, fadlan isoo gudbiya si aan ugu gudbiyo dhamaan dadka ay qusayso.
Nagala soo xeriir Halkaan waraaqada waraaqada hoos ku taal.use of cystone tablets
order cialis online overnight buy augmentin genericWaxaan rabaa inaan iska kiin baro:
Magac: Maxamed Maxamuud Caddaawe (Geeddow)
coumadin discount couponsKu dhashay: degmada Wardhiigley, magaalada Xamar
Dhashay: 1945benzac ac wash buy online
waxaan ahay nin xaas iyo caruur leh, haddana abkow ah kuna nool waddanka Nederland (Holland) magaalada Breda.
lamictal buy cheapWaxbarasho
Dugsi quraan: Macalin Xaaji Cumar Indho gaduud (alaha ha u naxariisto) Dugsiga Hoose: sanad dugsiyeedka 1954-1955 ayaan bilaabey ilaa 1960-1961, anoo ka kala dhigtey: iskool wardhiigley, Boondheere iyo Xamar jajab.
Dugsiga dhexe: sanad dugsiyeedka 1961-1962 ilaa 1963-1964 ayaan dhigtey oo markaas loo yaqaaney scuola commercial, shahaadana ka qaatey.
Dugsiga sare: sanad dugsiyeedka 1964-1965 ilaa 1967-1968 ayaan dhigtey oo markaas loo yaqaaney Istituto tecnico per ragioneri, tipo Italiano oo ku yiilay isbitaalka Digfer aktiisa, Shahaadana ka qaatey.
Jaamacad: sanad dugsiyeedka 1968-1969 ilaa 1969-1970 ayaan dhigtey Jaamacada ummadda qeybta dhaqaalaha.
1968: xafiiskii ra'iisu wasaaraha u qaabilsanaa arrimaha shaqaalaha (dirizione generali del personale, oo aan ka ahaay shaqaalo caadi ah.
1969: wasaaradda xannaanada xoolaha, oon kanaqday madaxa Xisaabka
1973: sanad ayaa waxaa ley direy aqoon korosi dibada ah, waxaan aadey waddanka midowga sofiyeeti (Russia), halkaas oo ka dhigtey dugsi sare Comsomoolka.
1974: maamulaha xisaabaadka (chief financial manager ) ee Dugsiga
Xannaanada Xoolaha oo ahaay Masharuuc ey iskakaashahaayeen Jamciyadda Qurumaha iyo Dowladda Soomaaliya kaasoon ka shaqeyhaayay ilaa bishii Juunyo1977.
1977: Xiriirka Guud ee ururada shaqaalaha soomaaliya, oon kanaqday
Guddoomiye ku xigeenka Ururka Shaqaalaha Beeraha,Xoolaha iyo
1977: Guddoomiyaha Ururka Shaqaalaha Beeraha,Xoolaha iyo Macdenta.
1979: Agaasimaha waaxda maamulka iyo lacagta ee Wakaaladda Horuumarinta Xoolaha oo loyiqiin (L.D.A.)
1979: waxaan 1979-1981 ka mid ahaay garsoorayasha kubadda cagta (Arbiter)
1982: Agaasimaha Waaxda Maamulka iyo Lacagta ee Wakaaladda Keenidda , Soosaaridda iyo Dhoofinta daawooyinka oo looyiqiin(ASPIMA).
1986: waxaan dalbaday shaqo ka tegid (ruqso) waana la iga ogolaadey.
1986: waxaan bilaabey inaan ganacsado anoo ka ganacsan jirey Talyaaniga
(Italy) iyo sacuudi carabiya (Saudi Arabia).